Banyere ịgba ọkụ na -atụgharị ntụgharị Sputtering
Microstructure nke ihe na-agbagharị agbagharị na-agbagharị agbagharị bụ okirikiri achicha dị ka mkpụrụ ọka dị larịị, na nghazi ọka dị ka ntụzi aka nke ntụgharị ntụgharị. Enwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọkwa micron na nzukọ a., na mkpokọta porosity dị elu dịka 5-20%.Ọgụgụ na udi nke pores na-adabere kpamkpam na ihe mkpuchi, A na -ejikọ pores na iru mmiri gburugburu ebe obibi na nkwadebe na ịchekwa ebumnuche, na adsorption na desorption nke oxygen.Ya mere, ebumnobi nke ịgba ọkụ ga -eji mgbapụta nkwado dịpụrụ adịpụ wepu gas mgbasa ozi dị n'elu tupu ọ gbasaa..
Ịgba ọkụ ọkụ nwere ike iji ihe mkpuchi nke mkpara, wires na ntụ ntụ, nke na -agaghị agbaze tupu agbaze, ya mere teknụzụ na -agbachapụ agbacha agbacha dị mma maka ihe dị iche iche dịka ọla, alloys na seramiiki .. Teknụzụ lekwasịrị anya nkedo na -ejedebe naanị na igwe ma ọ bụ ihe alloy nke ebe agbaze ya na ngwa nkedo.. Ihe seramiiki ndị na -adịghị mma adịghị adabara nkedo. Ọ bụrụ na ebe mgbaze dị oke elu, a chọrọ akụrụngwa nkedo pụrụ iche..Ụfọdụ ihe seramiiki ga -adị mma ma ọ bụ mebie tupu ha eruo ebe mgbaze.
Ebumnuche na -agba ọkụ na -agbagharị agbagharị bụ ịgba ihe mkpuchi ahụ ozugbo na akwa, na -enweghị usoro njikọta ọzọ (ebe na -agbaze ihe na -erughị 450 Celsius) na nkedo dị warara. Otú ọ dị, ụfọdụ “adụ” ọla ndị nwere ebe mgbaze dị elu, dị ka Ag, ga -ejikọrịrị iche.
Prev: Gịnị bụ ebumnuche seramiiki Sputtering a na -ahụkarị
Next: Ọhụrụ ụdị titanium-aluminum alloy lekwasịrị n'ichepụta usoro